Hiran State - News: M/weynaha mustaqbal Prof Warfaa oo maanta ka qudbeynaya jaamacada Minnasota.
M/weynaha mustaqbal Prof Warfaa oo maanta ka qudbeynaya jaamacada Minnasota.
Sabti 26,Feb 2011 (HSOL)-Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed M Warfaa oo ku si jeeda qaarada Africa ayaa hada ku jooga safar labo maalmood ah magaalada Mankato si uu halkaas qudbad ugu jeediyo ardeyda iyo shacabka ku nool magaaladaas. sida laga soo xigtay qaar ka mid ah aqoonyahanada Somaliyeed ee halkaasi ku nool sida Professor Aaloow iyo Dr Fanah Adan Deeqow oo ka mid ah aqoonyahanada Somaliyeed ee bulshada magaaladaas amaba gobolkaas si weyn looga yaqaano kana midka ah qaban qaabiyasha shirkaan ka dhacayo jamacada Minnasota qeybteeda Mankato.
Prof Warfaa ayaa halkaasi ay ku casuumeen aqoonyahano iyo Professoro wax ka dhiga amaba wax ka barta jaamacadaas oo iyagu halkaas si weyn ugu soo dhaweeyey madaxweynaha mustaqbalka isagoo maanta qudbad dhinacyo badan taabaneysa oo iskugu jirta aqoon kororsi, arimahiisa siyaasada iyo xaalada Somaliyaba ka jeedin doona halkaas.
Kulanka kedib ayaa Profka la dejinayaa Hotel Sharaton ee magaalada Minneapols. mudadada uu ku sugan yahay Minneapols ayuu la kulmi doonaa qeybaha kala duwan ee shacabka Somaliyeed ee halkaasi ku nool. kedibna isla habeen danbe amaba subaxa Isniinta waxuu ka duulayaa magaalada Minneapols halkaas oo uu ugu sii gudbayo dalkaasi Kenay ka hor inta uusan tagin Somaliya. wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobina waxey sheegayaan in madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa halkaasi looga diyaariyey guriweyn oo u ku bilaabo ololahiisa musharaxnimo inta laga gaarayo waqtiga rasmiga ah oo ku beegan bisha May sida lagu helayo warbixino ka imaanayo gudi ay dhawaantan iska dhax doorteen baarlamaanka Somaliya oo howlahaasi soo diyaariya.
Prof Warfaa ayaa soo gabo gabeeyey shirarkii diplomasiyadeed ee caalamka halka uu hada xooga saarayo qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed. Prof Warfaa ayaa systemka uu doonayo inuu ku soo siyaadiyo dadka iyo dalka Somaliya waxaa ka mid ah in ay noloshu wada gaarto dhamaanba shacabka Somaliyeed. waxaa kale oo ka mid ah inuu xooga saarayo sidii ay caruurta Somaliyeed u heli lahaayeen nolol iyo taciin tayo leh.Inta uu hayo hogaanka Somaliya waxaa qorshaha ugu jirto waxka qabashada musuq maasuqa, caafimaadka, horumarinta danyarta Somaliyeed iyo ilaalinta danta qaranka iyo muwaadiniintooda.
Marka laga soo tago wararka suuqa ku jira ee leh waa muwaadinka ugu jaaniska fiican inuu xilkaan ku guuleysto hadane calaamado arintaasi muujinayo ayaa shacabka u muuqda. wax yaabaha saacidayo Prof Warfaa ayaa waxaa 1 ka ah.
1- Waa aqoonyahan waaya arag ah dhaqanka Somalidana si wanaagsan u yaqano.
2-Baahi weyn oo uu u qoabo jago maanta ma jirto nolol ku filan wuu yestaa laakinse waxuu doonaya inuu dalka iyo dadka Somaliyeed isbedel la taaban karo ku sameeyo.
3- Hogaanka dalka ugu sareeyo inuu u tartamo ma aheyn fikir isaga ku dhashay ee waa talo soo jedin ka timid qeybaha kala duwan ee shacabka Somaliyeed.
4- Waa shaqsi si wanagsan iskugu soo dhaweyn kara fikir kala duwanaanshaha ku kala dhex jira shacabka Somaliyeed ee qoys qoyska iyo reer reerka dhafsiisneyn.
5- Bulshada uu doonayo inuu hogamiyo(Somaliya) waa dad uu si wanaagsan wax ugu dhaadhicin karo hadii dhinaca wanaagsan loo jiheeyo.
Ugu danbeyn waxaanu sugnaaba waa doosharasha soo socota iyo madaxweynaha mustaqbalka Prof Warfaa oo inta guuleysta Somali isku soo dumiya. I hope inuusan marin jidkii ay mareen dhawrkii madaxweyne ee ugu danbeysay ee inta idaacadaha yimaado lahaa waxaanu maanta xoreynay degmada Hodan iyo Howlwadaag sidii waxey dal kale ku duuleen.
· admin on February 26 2011 12:17:41 · 2 Comments · 2202 Reads ·
#1 | Habiba on February 26 2011 14:13:01
#2 | yusuf colow ahmed on February 26 2011 22:19:58
waa guul iyo gobanimo in uu nin aqoonyaha ah uu xika wadanka u u istaago waxan leyahay profosore illah waxanu kaka baryeynaa in uu allah kugu guuleeyo aamiin waxau soo marney wax intii noli ka shekeyn doonto
14,614,335 unique visits